Websaydhka Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah »Ogolaanshaha Jaamacadda Hodges
Waad ku mahadsan tahay booqashada websaydhka Hodges. Jaamacadda Hodges waxay raacdaa dhammaan sharciyada iyo qawaaniinta sida looga baahan yahay Xeerarka Florida, sharciyada Federaalka Mareykanka, iyo Xeerka Ilaalinta Xogta Guud (GDPR). Jaamacadda Hodges waxaa laga heli karaa internetka www.hodges.edu. Waxaan sidoo kale leenahay xarun kambani oo ku taal Fort Myers: 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, FL 33966.
Waxaan ku soo aruurineynaa xog iskood ah oo la bixiyo oo ku saabsan booqdayaasha degelkeenna iyada oo loo marayo xisaab-abuurka, dalab, iyo foomamka xiriirka ee lagu soo gudbiyo degelkan.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan isticmaalnaa xogta raadraaca bogga si aan u siino khibrada ugu wanaagsan ee isticmaale. Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa cookies-ka boggayaga internetka si aan u toosino oo u habeynno macluumaadka ku saleysan dariiqa aad ku soo gasho goobta. Boggan sidoo kale waxay uruuriyaan macluumaadka taraafikada iyo booqdayaasha sida bogga internetka iyo cinwaanka internetka ee kombiyuutarka aad isticmaaleyso adoo adeegsanaya aaladaha gorfeynta webka ee caadiga ah iyo aaladaha raadraaca. Macluumaadka la ururiyey waxaa loogu talagalay oo keliya isticmaalka gudaha si loo taageero diiwaangelinta ardayda, looga jawaabo weydiimaha booqdayaasha websaydhka, iyo falanqaynta websaydhka.
Xiriirinta ilaha Internetka ee dibadda, oo ay ku jiraan bogagga internetka, waxaa loo bixiyaa ujeeddooyin macluumaad oo keliya; iyagu kama dhigan karaan oggolaansho ama oggolaansho ay ka heleen Jaamacadda Hodges mid ka mid ah wax soo saarka, adeegyada, ama ra'yiga shirkadda, urur, ama shaqsi. Jaamacadda Hodges wax mas'uuliyad ah kama saareyso saxsanaanta, sharci ahaanta, ama waxyaabaha ku jira bogga dibedda ama xiriiryada ku xiga La xiriir bogga dibedda si aad uga jawaabto su'aalaha la xiriira waxa ku jira.
Guud ahaan, websaydhka Hodges waxaa loogu talagalay inay adeegsadaan dadka waaweyn, haddii aan si gaar ah loogu calaamadin carruurta. Hodges si ogaal la’aan ah kama soo uruuriso macluumaadka shakhsiga ah carruurta da'doodu ka yar tahay 13 sano. Haddii aan ogaanno inaan ka soo ururinnay Macluumaadka Shakhsiyeed ee carruurta da'doodu ka yar tahay 13 jir oo aan si iskood ah noogu imaan, waxaan ka tirtiri doonnaa xogtaas nidaamyadeenna.
Haddii aad tahay shaqsi ka tirsan Midowga Yurub oo aad la macaamisho Hodges marka la eego ogeysiiskaan, GDPR wuxuu bixiyaa xuquuqda soo socota. Si aad u adeegsato mid ka mid ah xuquuqdan, fadlan la xiriir Sarkaalkayaga Ilaalinta Macluumaadka ee Gloria Wrenn, jobs@hodges.edu..